တရုတ်နိုင်ငံက အာဖရိက ၃၁ နိုင်ငံနှင့် နှစ်ဖက်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ်များ လက်မှတ်ရေးထိုး - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံသည် အာဖရိကနိုင်ငံ ၃၁ နိုင်ငံနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ်များ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း ယနေ့ (နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်) တွင် ထုတ်ပြန်သည့် ခေတ်သစ်တွင် တရုတ်-အာဖရိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ စက္ကူဖြူစာတမ်းအရ သိရသည်။နိုင်ငံတော်ကောင်စီ ပြန်ကြားရေးရုံးမှ ထုတ်ပြန်သော သဘောတူညီချက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ၎င်း၏ နိုင်ငံသားများအတွက် ပြည်ပခရီးသွားလည်ပတ်နေရာအုပ်စုအဖြစ် အာဖရိက နိုင်ငံ ၃၄ နိုင်ငံအား စာရင်းထည့်သွင်းထားကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသားများအတွက် အာဖရိကနိုင်ငံ ၁၂နိုင်ငံနှင့် ခရီးသွားလာရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအုပ်စုကို တရားဝင်ကြေညာခဲ့ကြောင်း စက္ကူဖြူစာတမ်းက ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Nov. 26 (Xinhua) — China has signed bilateral documents on cooperation in tourism with 31 African countries, according toawhite paper on China-Africa cooperation in the new era issued on Friday.
The document, released by the State Council Information Office, noted that China has listed 34 African countries as outbound group tour destinations for its citizens.
The country officially launched group tourism businesses for Chinese people with 22 African countries, it added. ■
Photo : Chinese tourists are seen in the Khan el-Khalili bazaar market in Cairo, Egypt on Dec. 8, 2019. (Xinhua/Ahmed Gomaa)
ရှီ ၏ ဆားဘီးယား ခရီးစဉ် ဒုတိယ မြောက် နေ့တွင် သဘောတူစာချုပ် ၂၀ ကျော် လက်မှတ်ထိုး